Nanmalgyi - Page4of 725 - News & Entertainment
အသက် ၄၀ မို့ ဂျိမ်းစ်ဘွန်း အသက်အရွယ်ရောက်နေပြီ ဆိုတဲ့ စိုင်းစိုင်း
March 19, 2019 Panda Gyi 0
နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေ သာမက ယောက်ျားလေး ပရိတ်သတ်ပါ အခိုင်အမာ ရရှိထားတဲ့ အဆိုတော် သရုပ်ဆောင် စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်က လာမယ့် April 10ရက်နေ့ သုဝဏ္ဏဘူမိမှာ ကျင်းပမယ့် သူ့ရဲ့ 15ကြိမ်မြောက် Birthday showမှာ ဘယ်လိုအထူးခြားဆုံးတွေ လုပ်သွားမလဲဆိုတာကို ပြောပြသွားမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ “ကျွန်တော်ရဲ့ ဂီတသက်တမ်းတလျှောက်မှာ studio […]
March 18, 2019 Thet Naung 0
ဖက်ရှင်ခပ်လန်းလန်းတွေနဲ့ ယောက်ျားလေးတွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုတွေကို သိမ်းကြုံးယူထားပြီး အများချစ်စဖွယ်မျက်နှာပိုင်ရှင် Supermodel ဂျေနော် ကိုတော့လူတိုင်းသိကြမယ်ထင်ပါတယ်။ သူကတော့Sunday Journal နဲ့အင်တာဗျူးတစ်ခုမှာ သူကြိုက်တဲ့ပုံစံယောက်ျားလေးတွေရဲ့ပုံစံကိုပြောပြသွားပါတယ်။ သူကြိုက်တဲ့ ယောက်ျားလေးတွေရဲ့ပုံစံဘယ်လိုဆိုတာကို ပြောချင်လွန်းလို့မိတ်ဆွေတွေသိရအောင်ပြေပြပေးလိုက်ပါတယ်။ တက်တူးပါတဲ့သူတွေကိုသဘောကျလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကို “အရမ်းကြိုက်တယ် ။ နော်က တက်တူးတွေအပြည့်ထိုးထားတဲ့ယောက်ျားတွေဆိုရင်အရမ်းကြိုက်တယ်။ အရမ်းကြွေတာMaroon5 တို့လိုမျိုး တက်တူးကိုမှ အမိုက်စား Handsome ဖြစ်ပြီးတော့မှ […]
March 18, 2019 Dr.Nemo 0
ကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာတော့ အရက်ဆိုတဲ့အရာကြီးကို လူတိုင်းနီးပါး မြည်းစမ်း ကြည့်ကြဖူးမယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဈေးကြီးပေးပြီးတော့ ရောင်းအားအကောင်းဆုံး အရည်ကလည်း အရက်ပါပဲ။ လူတွေကို ပျော်ရွှင်မှု စိတ်ထွက်ပေါက်ပေးနိုင်တဲ့ အရာဖြစ်တာကြောင့် မကြိုက်တဲ့သူကတော့ ခပ်ရှားရှားပါပဲ။ တချို့ကတော့ ကျန်းမာရေးကြောင့်တော့ မသောက်ကျပါဘူး။ တချို့အရက်တွေကတော့ ထုတ်ပိုးထားတဲ့ ပုလင်းလေးတွေကတော့ တော်တော်လှပါတယ်း။ တချို့ကျတော့ ဗူးခွံလေးတွေက […]
March 18, 2019 Wadi 0
G Fatt နဲ့ နန်းဆုဟာဆိုရင် သူတို့နှစ်ယောက်စတွဲကတည်းက ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးမှုအပြည့်အဝရခဲ့တဲ့ စုံတွဲလေးဖြစ်ပြီး ရန်ဖြစ်လိုက်စိတ်ကောက်လိုက်ပြန်ချစ်လိုက်နဲ့ တွဲလက်တွေခိုင်မြဲနေကြတဲ့ အတွဲလေးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ “ကျွန်တော်ကအသားညိုပါတယ် လိုချင်တာ ခင်ဗျားကိုပါပဲ”ဆိုတဲ့ ညိုချောချစ်သူကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ နန်းဆုက G Fatt ကိုအသားဖြူအောင်လုပ်ပေးမယ်လို့စနောက်လေ့ရှိပြီး အဲဒါနဲ့ ပတ်သက်လို့ G Fatt က မကြာသေးမီက အင်တာဗျူးမှာ […]
နေ့စဉ်နဲ့အမျှ သင့်ဆံပင်ကို သင်နှိပ်စက်နေမိတဲ့အကြောင်းတရားများ
လူတိုင်းဟာ ရှင်းသန့်လှပကြော့မော့လိုသူချည်းပါပဲ။ဒီလိုပြည့်စုံလှပတဲ့အလှတရားတစ်ရပ်ကိုပိုင်ဆိုင်ဖို့ဆိုတာ မျှတတဲ့အစားအသောက်ပုံစံနဲ့ကောင်းမွန်တဲ့ဆံပင်အုံပေါ့။ဒီတစ်ခါမှာတော့ မှားယွင်းတဲ့နည်းမျိုးစုံနဲ့ ကျွန်မတို့ရဲ့ဆံပင်ကို ကျွန်မတို့ကိုယ်တိုင် နှိပ်စက်နေမိတဲ့အကြောင်းတရားအချို့ကို ဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။ဆိုတော့ သင့်ရဲ့ဆံပင်ကျန်းမာသန်စွမ်းဖို့ အတတ်နိုင်ဆုံး အခုဖော်ပြပေးမယ့်နည်းတွေကို ရှောင်ကြဉ်စေလိုပါတယ်။ ။ 1.ပျက်စီးနေတဲ့ဆံပင်တွေကိုမြန်မြန်မညှပ်ပစ်ခြင်း ဆံပင်အဖျားပျက်စီးတဲ့အခါမျိုး၊နှစ်ခွဖြစ်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာ မြန်မြန်တိပစ်ဖို့ထက် ဆံပင်တိုသွားမှာကို စိုးရွံ့တဲ့စိတ်နဲ့ ဒီ့ထက်ရှည်အောင် အချိန်ဆွဲထားတတ်ကြပါတယ်။အမှန်မှာတော့ ပျက်စီးနေတဲ့ဆံပင်တွေကို ပုံမှန်တိညှပ်ပေးရုံနဲ့တင် သင့်ဆံပင်တွေရှည်လာနိုင်ပါတယ်။အကြောင်းရင်းက သင့်ဆံပင်တွေသန်လာခြင်းမဟုတ်ပဲ ပျက်စီးပြတ်ထွက်နေတဲ့ဆံပင်တွေကို […]
ချောမောလှပခြင်းဆိုတဲ့ရုပ်အလှဟာ ယောင်္ကျားလေးတစ်ယောက်ရဲ့အာရုံကို ဖမ်းစားနိုင်စွမ်းရှိတာမှန်ပေမယ့် ချစ်ကျွမ်းဝင်ပြီး ရေရှည်ချစ်သက်တမ်းတစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့ကျ ရုပ်အလှတစ်ခုတည်းနဲ့တင် မလုံလောက်နိုင်ပါဘူး။ဆိုတော့ ဒီတစ်ခါမှာတော့ ရုပ်အလှထက် အရေးပါတဲ့ ဂုဏ်ရည်လက္ခဏာတွေကို စုစည်းဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ။ 1.Smile အပြုံးဆိုတာကတော့ အမျိုးသမီးတွေကို ဆွဲဆောင်မှုရှိစေရုံတင်မကပါဘူး မြင်သူတိုင်းရဲ့ရင်ကိုအေးစေပြီး ပျော်စရာအခိုက်အတန့်တစ်ခုကို ဖန်တီးပေးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ 2.Cooking Skills အချက်အပြုတ်ကျွမ်းကျင်ခြင်းကလည်း ယောင်္ကျားလေးတစ်ယောက်ရဲ့နှလုံးသားကို ဖမ်းစားနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ […]
မွေးရာပါ အမှတ်အသားများ ထူးထူးခြားခြား ပါလာသူများ
လူတချို့မှာ မွေးရာပါ အမှတ်တွေ အသားပိုတွေနဲ့ အခြားထူးဆန်းတဲ့ ပုံတွေပါတတ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ ဒီလိုပါရင် ပြန်ဝင်စားတယ်လို့ အယူအဆရှိပါတယ်။တခြားနိုင်ငံတွေမှာတော့ ဒီလိုပါလာရင် သူတို့နည်း သူတို့ဟန်နဲ့ ဖျောက်ပစ်လိုက်တာမျိုးတွေလဲ ရှိပါတယ်။ဒီလို အမှတ်အသားပါတဲ့ ထူးဆန်းတဲ့သူတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ 1 Connie ဆိုတဲံ ကလေးကတော့ သူ့ရဲ့ နှာခေါင်းလေးမှာ နီးရဲနေတဲ့ […]
ယောက္ခမတော်ချင်စရာ WWE ချန်ပီယံကြီးတွေရဲ့ သမီးချောများ
အဖေဖြစ်သူတွေ နပန်းပွဲတွေနားလိုက်သော်လည်း သူတို့သမီးတွေကြောင့် နာမည်ပြန်ရလာကြပါတယ်။သူတို့ သမီးကိုလိုချင်တော့ နည်းနည်းစွန့်ရမှာဖြစ်သလို အကိုင်ပေါက်ခံနိုင်အောင်လဲ လေ့ကျင့်ထားဖို့ လိုပါလိမ့်မယ်။ 1. Natalya Jim Neidhart ဆိုတာ တချိန်က WWE ကစားသမားကြီးဖြစ်ပြီးတော့ ပရိသတ်အခိုင်အမာရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။သူဟာ ချန်ပီယံ ဖြစ်ခဲ့သလို သူ့နာမည်က ဒီလောက်နဲ့ မရပ်တန့်ပဲ သူ့သမီးကြောင့် သူ့ကို […]
ခေတ်ရဲ့ ပျက်စီးမှုကို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းဖော်ပြထားတဲ့ ကာတွန်းပုံတွေ
လက်ရှိခေတ်ရဲ့ ဖြစ်ပျက်နေတဲ့ အနေအထားကို ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်နိုင်ဖို့နဲ့ ဆင်ခြင်နိုင်ဖို့ အနုပညာရှင်တွေက အမြဲမပြတ်ဖန်တီးခဲ့ပါတယ်။သူတို့ရဲ့ ဖန်တီးမှုဟာ တကယ်ပဲ ခေတ်ရဲ့ အခြေအနေကို သရော်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်လို့ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။သူတို့သရော်မှုကို ကိုယ်တွေးထင်မိသလိုသာ ရေးသားဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပြီး မိမိ စိတ်ကြိုက် ပုံတွေတိုင်းမှာ ခေါင်းစဉ်တပ်ပြီး တွေးယူနိုင်ပါတယ်။ 1. လူမှုကွန်ယက်ရဲ့ ကျေးကျွန်တွေ သရဲတစ္ဆေတွေဖြစ်သွားတဲ့အခြေအနေကို ပြသမှုဖြစ်ပါတယ်။. […]
အမျိုးသမီးတိုင်းအတွက် မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါရဲ့ အသုံးဝင်နည်းများ
March 18, 2019 Panda Gyi 0
မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါရဲ့ အသုံးဝင်နည်းတွေကို ရှေကအစဉ်အဆက်ဖော်ပြလာခဲ့ကြပေမယ့် သူ့ရဲ့ အသုံးဝင်မှုက မကုန်သေးပဲ သူကို နည်းလမ်း 300 လောက်နဲ့ ကောင်းမွန်စွာ အသုံးချနိုင်တဲံ အရာဖြစ်ပါတယ်။အခုလည်း မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါ အမျိုးသမီးတိုင်းအတွက် အိမ်စောင့် ဆေးဝါးဆိုရင် မမှားတဲ့အတွက် ထပ်မံအသုံးဝင်တဲ့နည်းတွေ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ 1. Natural deodorant. မုန့်ဖုတ်ဆိုဒါဟာ သဘာဝဂျိုင့်လိမ်းဆေးဖြစ်ပြီး […]
« 1 …345… 725 »